Ururka Eskişehir Bar: Kanal İstanbul wuxuu dhaawici doonaa Amniga Qaranka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirUrurka Eskişehir Bar: Kanal İstanbul wuxuu dhaawici doonaa Amniga Qaranka
01 / 01 / 2020 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, TURKEY
Eskisehir Bar Association Channel Istanbul waxay waxyeeli doontaa amniga qaranka
Madaxweynaha Isutaga Bariga Eskihirehir Mustafa Elagöz ayaa sharraxay aragtidiisa ku saabsan Mashruuca Channel Istanbul wuxuuna sheegay in mashruucu wax u dhimayo amniga qaranka iyo deegaanka.
War-saxaafadeed ay soo saartay Ururka Eskişehir Bar Association ee Mashruuca Kanal Istanbul wuxuu ahaa sidan soo socota: Bakanlığı Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalayntu waxay shaacisay in Warbixinta Qiimeynta Deegaanka Etki ”(EIA) ee loo diyaariyay Mashruuca Kanal Istanbul la ogaaday inay ku filan tahay oo loo furay aragtida dadweynaha waxayna xustay in mudada faallooyinka ay ahayd 10 maalmood.
Annaga oo ah Ururka Isbahaysiga Eskişehir, waxaan ognahay aragtideena ku saabsan Mashruuca Kanal İstanbul waxaanan u iftiimineynaa dadweynaha si waafaqsan waajibkayaga ah inaan difaacno sharciga, xuquuqda aadanaha, inaan ilaalino oo aan fikradahan dhaqan galno.
Montreux Convention saabsan taliskii of cidhiidhi ku, oo ay la socdaan Lausanne Treaty ee, heshiiska lagu aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga. Sida heshiiskii Montreux Straits, xuquuqda madaxbannaan ee aan ka helnay hoggaanka hoggaamiyaha sare Mustafa Kemal Atatürk lama aqbali karo in lagu kaydho sheegashada danaha dhaqaale; Madaxbanaanida qarankeena iyo amniga qarankeena, oo ilaaliya heshiiskan, marna lagagama hadli karo.
Montreux Convention Straits dayn inay xaaladda ka dhigista, aasaasay Xukunka buuxa Turkiga iyadoo cidhiidhi ku badan. ammaanka ee Turkiga, waxaa la ogaysiinayaa ee marinka ee maraakiibta in ay horay Turkey, sida ku xaddidan marka la eego tirada iyo tanka maraakiibta dagaalka ee la soo dhaafay iyada oo cidhiidhi ku, maris ah maalinta sameeyey, mamnuucidda ee cunaha inuu u duulo diyaaradaha dagaalka ka badan gujis kaliya oo ka mid ah la heestayaal u Badda Madow si ay u tagaan si ay saldhigyadoodii on Badda Madow, mari haddii ay daawado ee maalinta iyo biyo wajiga of Turkey maraa dhuunta ay dhacdo in dagaalka ayaa soo galay qodobada Itobiya ayaa, sida la sii daayo reer Maxlii Turkiga, aawadood oo ah danaha dhaqaale ee lagu muujiyay saldhig ahaan mashruuca ma aha xeerarka in la gowraco ayaa laga yaabaa.
Sida ku xusan go'aanka Wimbledon, heshiisyada lagu maamulayo kanaalada caalamiga ah iyo Maxkamadda Cadaaladda ee Joogtada ah, kanaal ku biiraya maraakiibta caalamiga ah ee badda ayaa ku xiran madax-bannaanida dowlad-goboleedka xeebaha; heerka caalamiga ah. Iyada oo ku saleysan, kuwaas oo xeerarka dalka Turkiga, channel ee ma aha sida u dhow kala guurka ah si ay u hoggaansamaan danaha, waxaa suurtagal ah in la yidhaahdo ma kala maraya maraakiibta. Si kale haddii loo dhigo, xuquuqda marinka xorta ahi ma daboolayo oo keliya maraakiibta ganacsiga, laakiin sidoo kale maraakiibta dagaalka. Tani lama qadarin; Waxay ka imaaneysaa daruuriga ay ku soo rogtay sharciga caalamiga ah kiisaska la midka ah.
Haddii mashruuca Canal Istanbul la hirgaliyo, labada dowladood ee xeebaha Madow iyo dowladaha aan lahayn xeebta Badda Madow waxay heli doonaan fursad ay kaga gudbaan dariiqa iyaga oo aan loo dulqaadan doonin xayiraadaha ay Montreux ku soo rogtay maraakiibta dagaalka; Amniga qarankeena si joogto ah ayaa loo handadaa. Suuragal maahan in la saadaaliyo khasaaraha ka soo gaadha Badda Madow, oo ay ka buuxaan maraakiibta dagaalka, iyo u beddelka Mareykanka u beddelo goob tartan oo u dhexeysa Ruushka iyo amniga iyo badbaadinta waddankeenna.
Intaa waxaa dheer, in kasta oo ay soo jeediyeen soo-saareyaasha mashruucu in mashruucu uu ku bixin doono faa'iido dhaqaale iyada oo la imanayo dakhli ku-meel-gaar ah oo lagu maro kanaalada; Maaddaama aysan suuragal ahayn in laga hortago maraakiibta mareya dariiqa ay doorbidayaan maraakiibta kuwaas oo labadaba kiiloomitir ka gaaban isla markaana ka raqiisan marka la eego dhinaca dhaqaalaha, sheegashadaan ayaa sidoo kale ah sheegasho aan sal lahayn oo loo soo bandhigay oo keliya in lagu bixiyo taageerada shacabka oo loogu talagalay in lagu marin habaabiyo shacabka, laguna difaaco xukunka sharciga iyo danaha guud marka loo eego howsheena. Waxaan dareemeynaa baahida.
Marka lagu daro xuquuqaheena madaxbannaanida iyo amniga qaranka, waxaan sidoo kale u baahan nahay inaan wax ka nidhaahno saameynta mashruucu ku leeyahay isku dheelitirka deegaanka. Way iska caddahay in marinka dhulka hoostiisa iyo dusha sare laga lumi doono mashruucan. Haddii mashruucan la hirgaliyo, biyaha cusbada leh ee soo gelaya harada Terkos waxay waxyeello u geysan doontaa biyaha la cabo ee in ka badan lix iyo toban milyan oo qof oo ku nool Istanbul. Intaas waxaa sii dheer, noocyada ku nool Badda Madoow iyo Marmara waxay sababi doonaan baabi'in.
Qorshaynta mashruuca in meel ka mid ah khatarta seismic iyo keenaysay khadadka gardarrada dadban, kaakicin halista, ma Turkey noqon kartaa halis awoodi karaa! Nolosha bini aadamka ayaa aad uga qiimo badan danaha dhaqaale. Haddii khadadka khaladku ay ku firfircoon yihiin hirgelinta mashruucan, waxay sidoo kale noqon doontaa ku xad gudub waajibaadka dawladda ee ah ilaalinta nolosha aadanaha.
Warbixinta EIA, waxaa lagu xusay in taraafikada dabiiciga ah ee Bosphorus ay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhici doonaan waxaana la sheegay in taraafikada Bosphorus laga deyn doono. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego xogta Wasaaradda Gaadiidka, sanadkii 2017, marka la barbar dhigo 42.978 markab oo gudbaya sanadkii 2019, 30.352 markab ayaa gooyay. Sidaa darteed, sheegashadaasi run maahan.
In kasta oo ay Jibuuti ka jirto, waa yaabka dabiiciga ah ee Istanbul, oo ah wadnaha adduunka, ma waxaa jira baahi loo qabo kanaal aan dabiici ahayn oo khatar ku ah nolosha aadanaha, amniga qaranka iyo mustaqbalka waddankeenna? Dabcan, MAYA!
Annaga oo ah Ururka Eskişehir Bar, waxaan la socodsiinaa dadweynaha iyo Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka aragtideena qaldan ee mashruuca Kanal Istanbul sababaheena sharciga iyo cilmiga ah. Waxaan jeclaan lahayn inaan ku casuunno dhammaan dadkayaga inay codsadaan Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta muddada gaaban ee nala siiyay oo aan uga soo horjeedno mashruucan qatar ku haya mustaqbalkeenna.
Degmada Istanbul waxay diiradda saari doontaa mashaariicda tareenka iyo tareenada
Ururka Eskişehir Bar
Kanaalka ma kicin karaa khadadka qaladka ee Istanbul
Markab Canal Istanbul oo gudbaya